Madaxweynaha Hirshabelle Oo Yimid Muqdisho – Goobjoog News
Madaxweynaha Hirshabelle Oo Yimid Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, kadib safar ay kaga soo ambabaxeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellaha Dhexe.
Madaxweynaha ayaa ulajeedka uu usoo aadey Muqdisho ku sheegay inuu la kulmi doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka oo uu sheegay inuu kala hadli doono arrimo la xiriira maamulkiisan cusub.
Sidoo kale Madaxweyne Cosoble ayaa sheegay in kulamo uu la qaadan doono bulshada Labada gobol ee Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, ayna ka wada hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee horyaalla maamulkiisa.
“Waxaan ku wajahanay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka, waxaan halkaasi kula soo kulmi doonaa beesha caalamka, waxaa billowday halgankii hirgelinta dowlad goboleedka Hirshabelle” ayuu yiri madaxweynaha maamulka Hirshabelle mar uu saxaafadda kula hadlayey magaalada Jowhar.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble uu la kulmo madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mas’uuliyiin kale.
17-kii bishan doorasho ka dhacday magaalada Jowhar ayaa madaxweynaha Hirshabelle waxaa loogu doortay Cali Cabdullaahi Cosoble, iyadoo ku xigeen loo doortay Cali Guudlaawe.
Wasaaradda Batroolka Iyo Macdanta “Ma Ogolaaneyno Wax Ka Yar Heshiis Xalaal Ah”
Hoggaamiyaha Maamul Goboleedka Catalonia Oo Sheegay In Xukunkiisa Uusan Hoos Tageyn Spain
Dagaal Beeleed Ka Socda Degmada Wanlaweyn Ee Sh/hoose
Ecrxfy hhasdy Viagra or cialis cialis 5mg
Gswmjh lbjyxr USA cialis when does cialis go generic
Xdpncm jnalhy ed pills online cialis otc
Npobbm tsmwdo pharmacy online Yzxkr...
"Federal Fire is rotating their crews aboard the ship with U...
Zkgkcn jsoftb canada online pharmacy Ubbwz...
Two fires crews were still on board the ship Sunday afternoo...
Firefighters battled a three-alarm fire on the ship Sunday m...